Ny taratasy amidy amidy amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny Papers Term tsara amidy amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Ahoana ny fomba hahitana taratasy amidy amin'ny Internet
Ny Internet dia nanao izay ahafahan'ny olona rehetra manana solosaina sy fifandraisana Internet mividy sy hanafatra ireo taratasim-bola amidy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ho fanampin'izany, noho ny mora fampitahana ny fivarotana sy ny fametrahana kaomandy, dia nanome ny mpianatra sy ny mpanjifa hafa ny fahazoana fitaovana sarotra azo taloha amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny taloha. Ankehitriny, ny olona rehetra dia afaka mankafy ny fanamorana sy ny fahombiazan'ny vidiny amin'ny fividianana na ny fahazoana taratasim-bola avy amin'ny fampiononana ao an-tranony na any amin'ny biraony, na aiza na aiza onenanany na iasany.
Saingy betsaka ny fanontaniana sy ahiahy momba ny fandaminana sy ny fampiasana serivisy toy izany. Ahoana ny fomba hisafidiananao serivisy mifanaraka amin'izay ilainao sy takinao? Inona no karazana serivisy tokony hampiasanao rehefa mandinika ny fividianana taratasy isan-karazany amin'ny fikarohana sy famakafakana? Ary inona no karazana naoty tokony hotadiavinao? Ireo olana rehetra ireo dia voavaly eto raha ny fahitanao azy.
Rehefa mandinika ny serivisy ianao dia tokony ho mailo amin'ny vidiny isan-karazany izay ampandoavina arakaraka ny totalin'ny kopia voadidy. Tokony ho fantatrao hoe ohatrinona ny sarany takiana amin'ny kopia tsirairay, ary inona ny karama farany ambany sy ambony indrindra. Raha mitaky pejy an-jatony amin'ny asa vita vita an-jatony ny mpianatra iray, dia te-hahafantatra izy raha toa ka voahodina amin'ny alàlan'ny serivisy haingana kokoa ny fangatahany, ohatrinona ny totalin'ny baiko omeny ary raha toa ka tafiditra ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana azy ireo. Ny orinasa mpanatanteraka dia mety hangataka fampahalalana fanampiny avy aminao, toy ny fanapotehana ireo sanganasa vita sy ny anarana ary ny adiresin'ireo tafiditra amin'ny fividianana.
Ny ahiahy iray hafa ho an'ny mpanjifa dia ny tahan'ny fahafaham-po atolotry ny maso ivoho. Ny teny hoe 'tahan'ny fahafaham-po azo antoka' dia midika fotsiny ny isan-jaton'ny asa vita izay efa nalefa tany amin'ny mpanjifa. Na dia maro aza ireo orinasa manombatombana ny isan-jaton'ny mpanjifa afa-po amin'ny sivifolo na avo kokoa, dia misy maro hafa izay manome isa ny isan-jato ambanin'ny roapolo isan-jato. Zava-dehibe ny mahatadidy fa ireo orinasa manolotra tahan'ny fahafaham-po azo antoka dia tsy voatery mandefa ny antontan-taratasiny ara-potoana rehetra. Ny hany tanjon'izy ireo dia ny hahatonga anao hamita ny kaomandanao haingana araka izay tratra.
Ny antoka amin'ny karazana rehetra dia tsara mandritra ny fotoana manokana. Raha toa ka tsy nahazo asa vita iray ianao aorian'ny fotoana voafaritra iray dia afaka miantso ny orinasa foana ianao ary mangataka ny volanao. Raha te hahalala ianao hoe inona ny fomba marina ahazoana famerenam-bola, dia tokony hametraka fanontaniana ianao mandra-pahazoanao valiny mahafa-po. Ny tsara indrindra dia tokony ho afaka mamerina ny volanao ao anatin'ny valo amby efapolo ora aorian'ny nametrahanao ny baiko nefa tsy nisy fanontaniana napetraka.
Ny orinasa dia tokony hanana tranokala ahafahanao mijery ireo asa samihafa azon'izy ireo vidina. Tokony hasehon'izy ireo mazava ny anaran'ny mpanoratra sy ny famoahana izay anaovana ny sanganasa. Ny tranokala dia tokony ahitana ny lisitry ny milina fanontam-pirinty rehetra misy ireo taratasy azo vidiana. Tokony hisy koa ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny orinasa tsirairay. Ho fanampin'izany, ny tranokala dia mety hanao lisitra ora ora ho an'ny mpanjifa sy adiresy mailaka ahafahanao mifandray amin'ny orinasa.
Ny fitadiavana taratasy amidy amin'ny Internet dia tsotra ihany. Ny fikarohana tranonkala tsotra dia hamerina valiny maromaro. Ny sasany amin'ireo orinasa ireo dia mety manana taratasy amidy mihoatra ny iray. Mety tsara izany raha toa ianao ka liana amin'ny fahitana takelaka iray amin'ny lohahevitra manokana. Na izany aza, mety ilaina ny manandrana orinasa maromaro alohan'ny hitadiavana iray izay azonao antoka fa mifanerasera aminao.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa rehefa mividy taratasy fihenam-bidy amidy an-tserasera ianao dia ny kalitaon'ny taratasy no tokony ho zava-dehibe aminao. Raha lafo loatra ny vidiny, na tsy nahavita nanoratra kalitao ny mpanonta dia azonao atao ny mitady any an-toeran-kafa. Raha afaka mahita orinasa manolotra fanoratana avo lenta ianao, nefa tena tsy lafo, dia mety mendrika ny ezaka fanampiny hiantsenana.